Golaha Murashaxiinta oo weerar afka ah ku qaaday R/wasaare Rooble – XAMAR POST
Golaha Murashaxiinta oo weerar afka ah ku qaaday R/wasaare Rooble
Warsaxaafadeed ay soo saareen maanta oo Axad aheyd waxay Golaha Midowga Musharraxiinta Madaxweynaha Soomaaliya kaga hadleen xaaladihii ugu dambeeyey Dalka.
Goluhu waxay Luuqad adag kula hadleen R/wasaare Rooble iyagoo ku canaantay inuu ka sariiganayo jidkii lagu ballamay ee dhex dhexaadnimada sida ay warka udhigeen.
Nuqul ka mid ah Qoraalkaasi oo Af ingiriis ku qornaa oo xamar post aragtay waxa goluhu ay sheegeen in ay ka walaacsan yihiin Sida uu Ra’iisal wasaaruhu uu ugu muuqdo mid ka sii gudbaya wixii lagu ballamay oo jid ka baxsan mowqifkiisa dhexdhexaadnimada laga sugayey ahaa.
Golaha musharraxiinta waxay warkooda intaas ku dareen in Mudane Maxamed Xuseen Rooble la kulmayo culays kaga imaanaya dibada oo howshiisa umadax banaaneyn, taasoo habacsanaan gelisey howshii ama geeddi socodka doorashooyinka loo ballansanaa.
Golaha Musharraxiinta waxay ku tartansiiyeen Ra’iisal wasaare Rooble inuu muujiyo madax banaanidiisa, joojiyana duulimaadyada dibada ah ee aan loo baahneyn waa sida lagu cadeeyey qoraalkooda.
Ugu dambeyntii Golaha Murashaxiinta waxay ku baaqeen in si dhakhso leh loo bilaabo hawsha ku wajahan hannaan doorasho oo hufan islamarkaana ay raali ka wada yihiin dhammaan shacabka.
Afar cisho kadib oo 20-ka bisha ku beegan waxay tahay xilligii Ra’iisal Wasaare Rooble uu ku dhawaaqay in shir DFS,Dawlad Gobolleedyada & G/Banaadir iskugu yimaadaan Muqdisho si loo dar dar geliyo Arimaha Doorashooyinka iyo hirgelinteeda,maadaama hore Howsha Doorashada & Amniga Xukuumada loo soo wareejiyey.
DHAGEYSO: Gudoomiyaha Cusub Gobolka Sool oo Amar ku bixiyey…
Rooble oo kusoo laabtay dalka una jawaabay golaha murashaxiinta